हट न्युज | Mobiles Khabar
काठमाडौं, १ चैत । ईन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट सेवा प्रदायक संस्था क्लास्सिक टेकले काठमाडौंका ४ नयाँ ठाउँहरुमा आफ्नो शाखा बिस्तार गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक निशा खरेलले फागुन ३० गते सम्पूर्ण शाखाहरुको उद्घाटन गरिन्। कम्पनीले भक्तपूरको गठ्ठाघर, ललितपुरको थसिखेल तथा काठमाडौंको किर्तिपुर, ट्याङ्लाफाँट र माछापोखरी, बालाजुमा एकै पटक शाखा विस्तार गरेको हो । यसअघि नै कम्पनीले २० शाखा स्थापना गरेर ...
काठमाडौं, १ चैत । नेपाल स्थित आइएमई लिमिटेड र भारत स्थित मुथुत फाइनान्सले चैत १ गतेदेखि भारत–नेपाल रेमिटेन्स सेवा शुरुवात गरेका छन् । सो सेवाको प्रारम्भसँगै विभिन्न उद्देश्यले भारतमा रहँदै आएका लाखौँ नेपाली नागरिकले मुथुत फाइनान्सका ४ हजार ६ सय शाखाबाट नेपालमा पैसा पठाउन सक्नेछन् । यसरी पठाएको रकम नेपालमा रहेका ७ हजार १ सय भन्दा बढी आइएमई एजेन्ट आउटलेटबाट ...
काठमाडौं, १ चैत । बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि अधिकृत बितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड को.प्रा.लि.ले नयाँ वर्ष २०७५ को योजना ‘बजाज युगारम्भ’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘नयाँ नेपालको नयाँ शुभारम्भ’ नारासहित नयाँ योजना शुरु गरेको हो । सो योजनाले विकासको युग आरम्भ भएको संदेश युवाहरुमा प्रवाह गर्नेछ । यसले देशको विकासप्रति युवाहरुलाई जागरित गराउने र अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने छ ...
काठमाडौं, १ चैत । सेन्चुरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा तुलसीराम गौतम नियुक्त भएका छन् । गौतमले आगामी बैशाख १९ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बहन गर्ने विषयमा बिहिवार बैंकले सम्झौता गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । गौतमले नेपाल बैंकबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रारम्भ गरी सो बैंकमा १३ वर्ष, नेपाल इण्डोस्वेज बैंकमा ७ वर्ष, नेपाल एस्.बी.आई बैंकमा कर्जा ...
काठमाडौं, ३० फागुन । बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि अधिकृत बितरक हो । हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले पूर्ण सुविधा सहितको नयाँ शोरुम क्रस बोडर प्रा.लि, दाङ्गको तुलसीपुरमा संचालनमा ल्याएको छ । नयाँ शोरुमले ग्राहकहरुलाई बाइकको स्पेयर पार्टस तथा एसेसरिज खरिदकालागि सहज बनाउने कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीका जनरल म्यानेजर योगेन गुरुङले फागुन ३० गते सो शोरुमको उद्घाटन गरे । ...
काठमाडौं, ३० फागुन। कोकाकोला नेपालले “कोक खाम् रसिया जाम्” क्याम्पेनको दोस्रो हप्ताको ४ जना भाग्यशाली बिजेताको नाम घोषणा गरेको छ । विजेताहरुमा महेश राई – लाजिम्पाट, ओमनाथ श्रेष्ठ – थिमी, राजिब प्रधान – इमाडोल, आशिष मान शिंह – न्युरोड रहेका छन् । सो योजना अन्तर्गत भाग्यशाली उपभोक्ताले सम्पूर्ण खर्चसहित रसियामा हुने विश्वकप २०१८ प्रत्यक्ष हेर्ने मौका पाउनेछन् । २ जना भाग्यमानी ...
काठमाडौं, ३० फागुन। सोसियल कमर्श प्लेटफर्म सगुनले भारतीय संचारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सको भगिनी संस्था एच्‌टी ओभरसिज प्रालि (एच्‌टी सिंगापुरसँग) ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ५० करोड नेपाली रुपैयाँ लगानीको सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ। एच्‌टी ओभरसिज प्रालि भारतको पुरानो तथा ठूलोमध्येको एक सञ्चार कम्पनी एच्‌टी मिडिया लिमिटेड (एच्‌टी मिडिया)को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। एच्‌टी सिंगापुरसँगको सम्झौताले सगुनलाई करीब ४६ करोड ...
काठमाडौं, २९ फागुन । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ३३औं शाखा काठमाडौंको टेकू स्थित अम्बे कम्प्लेक्समा फागुन २९ गतेदेखि संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागार्इले गरे । उक्त अवसरमा कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष हेमराज ढकाल तथा अन्य संचालक समितिका सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईले बीमा क्षेत्रको विकास र ...
काठमाडौं, २९ फागुन । माछापुर्च्छे बैंकले आकर्षक सुबिधासहितको एम. बि. एल. स्मार्ट बचत खाता संचालनमा ल्याएको छ । सो खातामा न्युनतम ५ हजार रुपैयाँ बचत गरी ६ प्रतिशत ब्याज प्राप्त गर्न सकिने छ । सो खाता मार्फत ग्राहकले विभिन्न स्मार्ट सुविधाहरु निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् । स्मार्ट सुविधा अन्तर्गत ग्राहकहरुले ईन्टरनेट बैकिङ्ग सुविधा, एमबिएल मोबाइल मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ...